पुष्पको सफल हुने रहर मारूनीले पुरा गर्ला त ? « Mazzako Online
पुष्पको सफल हुने रहर मारूनीले पुरा गर्ला त ?
`सपना पूरा भयो तर सफल अझै भएको छैनʼ यो वाक्य नायक पुष्प खड्काले आफ्नो डेब्यु चलचित्र दर्पणछायाँ २ को रिलिज पछि एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए । यो अझै पनि उनमा पक्कै लागेको होला किनकी दर्पणछायाँ २ पछि उनले अरू दुई चलचित्रमा काम गरे तर उनले सोचेको सफलता भने पाउन सकेका छैनन् ।
नायक पुष्प खड्काले दर्पणछायाँ २ पछि चलचित्र मङ्गलममा काम गरे । मङ्गलमबाट उनले राम्रो प्रशंसा पाउन सफल भए । चलचित्रमा उनले गरेको भूमिका तारिफयोग्य नै थियो तर पनि शो चलचित्रले उनलाई हिरोको रूपमा स्थापित गराउन भने सकेन । केहि क्रिटिक्स अवार्डमा नै उनले चित्त बुझाउन पर्यो, उत्कृष्ट नायक भने बन्न सकेनन् ।
मङ्गलम पछि उनलाई हिट व्यानर, महसंचारको चलचित्र दाल भात तरकारी मा नायिका आँचल शर्मासगँ देखियो । यो चलचित्रले पनि उनलाई सफलता दिलाउन भने सकेन । चलचित्र सँगै पुष्पले पनि धेरै आलोचना खेप्नु पर्‍यो । तर, व्यानर र अग्रज कलाकारकै कारण चलचित्रले ५१ दिन मनाउन त सफल भयो तर पुष्पले भने सफलताको स्वाद लिन पाएनन् ।
उनी अब अर्को चलचित्रको रिलिजको पर्खाईमा छन् । भाद्र १३ गते बाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र मारूनी लाई लिएर पुष्प निकै आशावादी रहेका छन् । चलचित्रको क्लव सङ्ग रिलिज भईसकेको छ जसमा उनलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी हट्केक साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह सँग दम्दार नृत्य गरेको देखिएको छ ।
गीत र पुष्पको डान्सले रेस्पोन्स पनि राम्रो पाईरहेको छ । त्यसैले उनी झनै उत्साहित छन्, मारूनीलाई लिएर । छिट्टै रिलिज हुन लागेको चलचित्रको अर्को लभ सङ्को रेस्पोन्सको प्रतिक्षामा आफू रहेको बताउने पुष्पको सफल हुने रहर मारूनीले पुरा गर्ला त ? समयले नै बताउला ।